Ambassador Wharton Vanopa Mari Masangano Maduku ekuMaruwa
Kukadzi 28, 2013
HARARE — Mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Bruce Wharton, vanoti kufa kwemwana wenhengo yeMDC-T kuHeadlands, Christpowers Maisiri, kunopa vatungamiriri venyika yeZimbabwe mukana wekuti varatidze chido chavo mukupedza mhirizhonga munyika.
Vachitaura nevatori venhau mushure mekutambidza rubatsiro rwemari yekusimudzira mabasa ebudiriro kumasangano abva kumatunhu akasiyana siyana munyika, Ambassador Wharton vati zvakakosha kuti hurumende yeZimbabwe, mapurisa pamwe nekomiti inoona nezvekutevedzwa kwechibvumirano cheGlobal Political Agreement, JOMIC, vaongorore kuti Christpowers akafa sei.
Vati chinosuwisa apa ndechekuti Christpowers ange ari mwana mudiki asina kana mhosva uyewo vana vadiki havaiti zvematongerwo enyika.
Zvichakadai, VaWharton vapa rubatsiro rwemari inosvika zana nemakumi mana ezviuru zvemadhora kumasangano emunharaunda dzakasiyana siyana kuitira kuti asimudzire mabasa ebudiriro aarikuita.
Vati rubatsiro urwu, urwo vapa pasi pechirongwa chehomwe yavo yeAmbassador’s Self-Help Fund, rwunoita kuti muzinda weAmerica udyidzane nenharaunda pamwe nekusimudzira hupenyu hwevanhu vemunharaunda idzi.
Masangano awana rubatsiro ndeanoti Bonda Art and Craft Community yekwaMutasa kuManicaland neLittle Children of the Blessed Lady yekwaChinamhora kuMashonaland Central, ayo apihwa zviuru makumi maviri zvemadhora.
Masangano aya achashandisa mari iyi mukuita mabasa emaoko anoita kuti vawane mari yekuchengeta nherera pamwe nemadzimai ari kutambura.
Vamwewo vawana rubatsiro ndeveRose of Charity Orphanage yekuVictoria Falls, Binga Craft Women’s Welding and Craft Program, Dombodema Market Gardening Project, St Francis Tshitshi yekuPlumtree, Vungu Secondary School yekuLower Gweru, pamwe neTakaza Horticulture Community yekuShurugwi.
Nhengo yeTakaza Horticulture Community, Amai Eunice Chipunza, vanoti vafara chose nerubatsiro urwu uye ruchasimudzira basa ravo.
Kubva muna 1980 kusvika pari zvino, pane masangano anodarika mazana matatu akapihwa rubatsiro runodarika mamiriyoni matatu emadhora pasi pechirongwa ichi.
Mari iyi yakashandiswa mukuvaka zvikoro, dzimba dzematicha nevakoti, kutanga mabasa ekudiridzira, kuchengeta nherera nezvimwe zvakasiyana siyana.